Cashar nololeed kii Oseola McCarty - NETBEINS
:Cashar nololeed kii Oseola McCarty
Cashar nololeed kii Oseola McCarty
Adduunka aynu ku noolnahay taariikhda iyo sooyaalku waxa ay u yihiin xaqiiqooyin aan la dafiri karin jiritaankooda oo mudan in casharro iyo tusaalooyin wax ku ool ah laga gunto. Hadda ba, halkaan waxa aan uga sheekeyn doonaa Oseola.Oseola waxa ay ahayd gabar nolol ay hardan iyo rafaad ku laranyihiin usoo joogtay, sidoo kale na ay […]
By admin July 27, 2019, 11:34 AM
Adduunka aynu ku noolnahay taariikhda iyo sooyaalku waxa ay u yihiin xaqiiqooyin aan la dafiri karin jiritaankooda oo mudan in casharro iyo tusaalooyin wax ku ool ah laga gunto. Hadda ba, halkaan waxa aan uga sheekeyn doonaa Oseola.
Oseola waxa ay ahayd gabar nolol ay hardan iyo rafaad ku laranyihiin usoo joogtay, sidoo kale na ay hami sare iyo himilooyin maankeeda ka dhex guuxayeen, oo dhexda u xiratay sidii ay uga miradhalin lahayd, dadkeeda na uga saari lahayd dhibaatadii waxbarasho la’aan ee halaakeysay. Dadku kala karti iyo dedaal badan e, waxa ay tusaale u tahay inta jaranjarooyinka nolosha ee qaarba qaarka kale ka adagyahay la halgamaya.
Oseola McCarty waxa ay ku dhalatay Weyne County, gobolka Mississipi ee dalka Mareylkan ka,7 March, sannadkii 1908-dii. Oseola waxa ay ahayd gabadha Lucy McCarty oo ahaa aabbe aan la aqoon taariikhdiisa rasmiga ah. Qoyskeedu waxa ay ku tiirsanaayeen dhaqaale ahaan beer yar oo uu awowgeed lahaa. Oseola hooyadeed iyo aabbeheed waa ay kala tageen oo adeerkeed ayaa guursaday hooyeed dabadeed na magaalo kale ayey u guureen . Sannadkii 1916-dii, ayaa ay hooyadeed dib-u midoobeen oo ay ku kulmeen gobolka Mississipi ee dadka midowga ahi ay degaan, halkaas na ay ka heshay fursad waxbarasho si ay jillaafooyinka jahliga kaga baxdo, iftiinka aqoonta na u dhaashato.
Waxa ay lajaanqaaday oo ay billowday dugsi hoose oo lagu magacaabo Eureka, oo ahaa iskuul gooni loo lahaa, oo ay waxbarashadiisu heersare ahayd. Oseola ma aysan ahayn seeg-seeg ku liidata waxbarashada ilaa ay ka gaartay fasalka lixaad. Nasiib darro se, Oseola waxa ay ku fashilantahay waxbarashadeedii, kaddib markii ay eedadeed oo xanuunsan ka tagi weysay, sidaas ayay na waxbarashadii kaga hartay(drop-out). Oseola hooyadeed waxa ay ka caawin jirtay geedi-socodka waxbarashadeeda oo lacagta ay soo shaqeyso ayaa ay waxbarashada kaga bixin jirtay. Waxa ay laamiga dhinaciisa ku iibin jirtay hooyadeed nacnac iyo xoogaa qudrad ah si ay u maareeyaan nolosha reerkooda, oo aysan gacmaha u hoorsan asaagood.
Banii aadamka garaad iyo dhugmada u saaxiibka ahi waa kan had iyo jeer ka fekara ee isku daya sidii uu uga bixi lahaa dhibta la soo derista e, waxa ay go’aansatay in ay noqoto Booyeyso-qofka dumarka ah ee dharka lacagta ku dhaqda- waa ayna ka rumeysay riyadaas oo waxa ay noqotay Booyeyso caan ah. Waxa ay noqotay qof aan hadlan badnayn oo aan qunyar socod ah. Waligeed ma aysan guursan ilmana ma aysan dhalin. Waligeed ma aysan baran sida gawaarida loo kaneeyo, sababtoo ah waxa ay aaminsanayd in aysan baahi u qabin gaari waddida, maaddaama aysan gaari lahayn dadkeeduna baahiyo gaar ah la tacaalayaan. Waxa ay dadka kale kaga duwanayd, ma aysan fariinsan jirin kolkii ay gaari raacdo, oo istaagga ayay meesha ay doonayso ku tagi jirtay.
Bishii July, sannadkii 1995-tii, iyada oo jirta da’da 87 sano, ayaa ay kasoo muuqatay shaashadaha caalamka oo ay soo jiidatay dareenka dadweynaha Ameerika, kaddib markii ay muujisay deeqsinimo .Waxa ay keydisay oo ay shaqadeedii booyaasadnimo ka aruurisay lacag dhan 150,000 oo dollar, waxa ayna ugu deeqday jaamacadda Southern Mississipi si ay waxbarasho lacag la’aan ah u helaan dadkii madowga ahaa ee aan awoodin in ay fursado waxbarasho u helaan sida dadka caddaanka ah oo kale.
Dhib iyo dheef kasta ee qofka soo marta, maaddama aysan waarin oo ay joogto ahaan, oo ay waqti lagu jaangooyey leeyihiin, ugu dambeyn, Osleola waxa ay dhimatay sannadkii 1926-dii, iyada oo taallooyin iyo taswiir lagu weyneeyo oo lagu darajeeyo loo tusmeeyey.
Warqaddii Abraham Lincoln u diray macallinka wiilkiisa